67 ha | Tags | Madagascar - Actualités de la diaspora malgache en France: reportages, événements malgaches, interviews, informations
Tags (8) : 67 ha
67 HA : Mpivarotra tandrok’omby notafihina jiolahy folo
Jiolahy folo lahy, niaraka tamin’ny basy poleta roa, no tonga nanafika tokan-tranon’olona iray mpanangona sy mpivarotra tandronk’omby, eny amin’ny 67 ha. Omaly tamin’ny 2 ora sy sasany maraina no nisehoan’izany. Voalaza fa nisaron-tava ny sasantsasany tamin’ireo mpanafika.
Andohatapenaka : Renim-pianakaviana naolana sy novonoina
Vonoan'olona feno habibiana no nitranga teny andohatapenaka i. Hita faty teny amin'ny fefiloha, eny andohatapenaka i, omaly vao maraina, ny vehivavy iray antsoina hoe solonirina olga, 37 taona.
67 ha, andohatapenaka, hjra, solonirina olga
67 Ha ATSIMO : MPAPIANATRA IRAY VOATIFITRA TEO AMIN’NY KIBONY
Tsy mitsitsy. Omaly tamin’ny 4ora sy sasany maraina no nitrangan’ity tranga mampivarahontsana, teny amin’ny 67ha Atsimo, ity. Mpampianatra iray nitondra sakaosy no lasibatry ny jiolahy. Olona roa no nanendaka azy. Nanohitra izy ka nisy ny tifitra izay nandoaka tao amin’ny lamosiny. « Mipetraka...
67 ha, Antetezana-Afovoany, jiolahy, tifitra, tsy atahorana